Mmanụ ala, 80% nke ndị nwere ụgbọ ala amaghị ya. Mmanụ ala, 80% nke ndị nwere ụgbọ ala amaghị ya. - LFOTPP
Mmanụ ala, 80% nke ndị nwere ụgbọ ala amaghị ya.
Ọ bụrụ na ọbara dị n’ahụ mmadụ na-elekọta mmegharị n’arụ akụkụ dị iche iche, ọ bụ akụkụ dị mkpa nke ahụ mmadụ.
Mgbe ahụ mmanụ dị n'ime ụgbọ ala ahụ na-arụkwa ọrụ a. Ọ bụrụ na ụgbọ ala na-enweghị ụdị mmanụ dị iche iche, ụgbọ ala ga-esiri ike mbanye.
Ka osi di, otutu ndi nwe ugbo ala adighi enwe mmasi banyere mmanu di iche iche di n’ime ugboala, ihe ha kariri n’agha bu mmanu ndi ozo dika mmanu di n’oku. Mmanụ dị ka mmanụ ụgbọala, mmanụ breeki, mmanụ mbufe, wdg.
Ha amachaghị ihe ha ga-eme ma ha nyawa ụgbọala ogologo oge, onye edemede ga-achọpụta mmanụ dị iche iche maka onye ọ bụla taa.
Mmanụ moto bụ isi ọrụ:
Ọrụ dị na mmanụ ahụ bụ inyere onye injin ahụ aka ịrụ ọrụ dị egwu, mana n'eziokwu, nke a bụ naanị otu ọrụ ọrụ mmanụ. Na mgbakwunye na lubrication iji belata esemokwu, mmanụ ahụ nwekwara nhicha nhicha ahụ, ịdochi ọnya na mgbochi mmiri, nchara na mgbochi corrosion, jụrụ oyi, na oke ọrụ ntinye ujo.
1. Mmanụ ala
Jiri mmanụ a mgbe niile, mepee ihe mkpuchi ihu iji hụ mkpanaka rọba na-acha odo odo, jiri obere ike dọpụta ya ma dọpụta iberibe ígwè ahụ. Enwere concave na ebe convex na njedebe. Onwere ihe di warara na elu na ala.
Nke a bụ ileba anya na ọkwa mmanụ dị gara aga ， lelee ọkwa mmanụ si ma ọ dị n'agbata oke na ala.
Na mkpokọta, oriri mmanụ adịchaghị njọ iji lanarị okirikiri n’agbata mmezi abụọ.
2. Agba mmanụ
Dịka ọmụmaatụ, n'oge nyocha ụbọchị, enwere adịghị ọcha ma ọ bụ isi mmanụ dị na mmanụ ahụ, anwụrụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ, nke na-egosi na injin ahụ nwere nsogbu, igwe nwere ike eyi na-adịghị mma, yana ekwesịrị idozi ya ozugbo enwere ike.
Mmanụ ịnweta: 5000 km ma ọ bụ ọnwa 6
Mmanụ moto nke na-eme ka obere anwụ: ọnwa 7500 ma ọ bụ ọnwa 6
Mmanụ moto zuru oke: 10,000 km ma ọ bụ ọnwa 12
Brake Fluid ọrụ
A na-akpọkwa ya brake fluid, nke bụ ihe dị mkpa na-emetụta arụmọrụ sisteko breeki nke ụgbọala. Site na breeki n'ụkwụ, breeki Master cylinder na-akwagharị site na oghere oghere. Cylinder brake cylinder na-akpali mmanụ breeki ahụ, ọ ga-adịkwa n'okpuru ụkwụ. A na-enyefe ikike a na batrị brọditi nke ụkwụ anọ ndị ahụ dị na mmanụ breeki. Silki breeki na-akpali ya ịmịcha breeki, papas na breeki na-afanyekwa diski brọọ ka ọ wee rụọ ike.
1. Brake mmanụ larịị ọnọdụ
Mepee ihe mkpuchi ahụ wee chọta ite mmanụ breeki (akara ngosi octagonal edo edo na mkpuchi), hichaa ite mmanụ breeki ahụ na mpempe akwụkwọ wee hụ ma ọ bụrụ na ọkwa mmiri breeki nọ n'ọnọdụ ọkọlọtọ. Ọ bụrụ na ọkwa mmiri dị n'okpuru ala dị ala (MIN), ịkwesịrị ịgbakwunye mmanụ breeki. Mmanụ breeki ga-eji otu ọnụọgụ mmanụ mmanụ ahụ dị ka nke ụgbọ ala mbụ. A na-edenye akara ahụ na mpempe mmanụ breeki.
2. Agba agba agba agba
Chọpụta ma agbaze mmanụ breeki ahụ ma ọ bụ nupụta ya, ma ọ bụ mgbe achọpụtara na mmanụ brake ahụ nwere adịghị ọcha ma ọ bụ sọọsọ ya, aga-edochi ya ma ọ bụ jiri nlezianya kpochaa ya.
Mgbe ejirila brake mee ihe ogologo oge, iko na pistons dị na cylinder master cylinder ga-eyi, na-eme ka mmanụ breeki bụrụ nke a na-agaghị agagharị, nke ga-emetụta mmetụta braki. Na mgbakwunye, mmanụ breeki ahụ ga-agbakwa mmiri ahụ na ikuku, nke mere na a ga-ebelata ebe a na-esi ya, ikuku nwere ike ịdapụta mgbe brake ogologo oge, nke a na-ebute ọdịda breeki. Oge nnọchi anya akwadoro bụ afọ 2 ma ọ bụ 40,000 kilomita.
Antifreeze isi ọrụ
Igwe nju oyi bụ ihe dị mkpa na-ekpo ọkụ na-ebu mmiri nke ụgbọ ahụ. N’oge ọkọchị, ọ pụrụ ime ka ụgbọ ala kporo ọkụ pụọ n’onwe ya na ịkụda usoro jụrụ oyi nke ụgbọ ahụ. N’oge anwụ na-ekpughe anyanwụ, mgbochi ikuku dịkwa mkpa iji gbochie “imeghe”.
1. Antifreeze mmiri larịị ọnọdụ
Mepee ebe nkwupute apoolu na nyochaa mmiri mmiri nke antifreeze. E nwere akara ịdọ aka na ntị abụọ dị n’ime igbe ahụ, otu bụ ọkwá kacha elu, ya bụ, ahịrị MAX, nke ọzọ bụ ahịrị kacha ala, akara nke MIN. Ọ bụrụ n'ịdị elu peeji dị n'etiti MAX na MIN, antifrize adabara. Ọ bụrụ na peeji a ga-eji afriji kwụsị n'okpuru akara MIN, ọ ga-agbakwunyeghachi ka oge na-aga.
2. Agba agba anwoo
Colorcha nke ncha ọgwụ nkịtị dị ọcha. Agbanyeghị, mgbe ịgbakwunye antifreeze ma ọ bụ tinye mmiri, ihe mmeghachi ahụ na kemịkalụ mgbe oge ụfọdụ ga-emetụta arụmọrụ antifreeze a ka ọ kwesịrị. Ihe ndị ahụ rụrụ arụ ga-eme ka ihe mgbochi ikuku mee ka ọ ghara iru ma kpatara mmebi nke sistemu jụrụ.
Ekwesịrị iji ọgwụ mgbochi a mee ihe maka afọ 3-5 ma ọ bụ 100,000 kilomita. Lelee ọkwa mmiri mmiri n'oge ọrụ mmezi ọ bụla, gbakwunye ya ka o kwesiri, ma dochie ọgwụ mgbochi mgbe ụbọchị mmebi.
Ike mmanụ ọrụ bụ isi
Mịnye mmanụ mmanụ bụ ụdị mmiri pụrụ iche eji eme ihe na nfuli. N’agha, a pụrụ ime ka injin nwere ezigbo ọkụ.
1. Ike mmanụ steeti ọkwa
Mgbe injin ahụ dara jụụ, chọọ mmanụ esite mmanụ (akara ngosi nwere eriri ntu na mkpuchi), mepee mkpuchi mkpuchi wee hichaa mmanụ na dipstick jiri mpempe akwụkwọ. Tinyegharịa dipstick ahụ n'ime ite mmanụ a na-akwalite ma wepụ ọkwa nlele. Ọ bụrụ na ọ dị ala karịa ahịrị dị ala, gbakwunye mmanụ mmanụ nkwalite mbụ na ahịrị azụ ma mechie mkpuchi ahụ na elekere.
2. Ike mmanụ agba
Ogo nke mmanu nnochianya dikariri ike karie nihi na odighi ntuzi aka, ma n’ozuzu mmanu mmanu ikike ohuru na acha uhie uhie ma nwekwaa ntughari, ebe mmanu n’etu ikike ogologo oge ga agba aja ojii na omuma a gha abia. buru ibu. belata.
Ntughari mmanu mmanu nke mmanu ndi mmadu na-adi ogologo. A na-atụ aro ka ọ dochie ya na 2 afọ ma ọ bụ 40,000 kilomita. N'ikwu okwu n'ozuzu, enwere ike ịnwale ya otu ugboro kwa ọnwa isii.
Maka mmanụ ụgbọ ala, anyị ga-ama ihe:
1. Ọrụ dị mkpa nke mmanụ dị iche iche dị mfe iji kpochapụ ozugbo nsogbu ụfọdụ bilitere.
2. Nyocha ndị a na-eme kwa oge n’etiti oge niile, dịka ọkwa mmanụ na ntinye
3, Mmanụ ọ bụla nwere usoro ndụ nke ya, ihe nlereanya nke ọ bụla dịtụ iche, onye nwe ya nwere ike na-ezo aka na ntuziaka ụgbọ ala
Dika ọbara nke ugbo ala, mmanu a notaghi nti na nyocha ihe nlezi anya, nke puru iweta mmetuta ojoo ma belata ndu ndu ugbo ala. Elegharala ndị enyi nke onye ahụ anya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnọchi ya, gaa n'ụlọ ahịa ndozi ọkachamara iji dochie ya.
Kpọọ na Action >> >>www.lfotpp.com
Ọzọkwa na Ihe Ọmụma Cargbọala 【LFOTPP】
Ọgbọ ọhụrụ nke Ndị Agbachitere Land Rover bụ ụwa mbụ nke nwere usoro ikuku ọhụụ zuru ụwa ọnụ
BMW M340i (G20) zuru oke gbanwere ikpegharị wiil na-eme ka taya na-ebuwanye ibu
Interiorlọ ụgbọ ala kachasị mma nke dị mma na 2019, olee nke kachasị amasị gị?